Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: အိန္ဒိယနွယ်ဖွားမြန်မာနိုင်ငံသားများသို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
by Myat Thein Tun's Facebook on Sunday, 13 November 2011 at 03:22 ·
ဒီနေရာမှာ..လက်ရှိကျွန်တော်တို့တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ Anti-Rohingha campaign နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည်ဖွား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ တခြားအိန္ဒိယနွယ်ဖွားလူမျိုးတွေကြားထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံခြားရောက် လူ့ အခွင့်အရေးActivists တွေရဲ့ ဝေဖန်စွပ်စွဲမှုတွေ..နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ အုပ်စုထဲမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ တချို့ တချို့ သော လူမျိုးရေးဝါဒီတွေရဲ့ မလျှော်ကန်တဲ့ ရေးသားဖော်ပြမှုတွေကြောင့် အမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်လမ်းကြောင်းကနေ သွေဖည်ပြီး အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတွေ၊ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခတွေမဖြစ်ပွားစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီစာကိုရေးလိုက်တာပါ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဘိုးဘွားမိဘတွေနဲ့ အတူ သက်စွန့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ရဲ့ ဘိုးဘွားမိဘတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ မျက်မှောက်ခေတ် နိုင်ငံသားတွေအတွက် ကျေးဇူးဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာ အကျယ်တ၀င့်ရှင်းပြစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကာလတလျှောက် ခုချိန်ထိ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ ဘ၀ချင်းတူညီစွာနဲ့ဆင်းရဲပင်ပန်းခက်ခဲစွာ ရုန်းကန်နေခဲ့ကြတာပါ ဘယ်လို လူမျိုးမှာမဆို အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းနဲ့ နီးစပ်သူကလွဲရင် အများစုဟာ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး လူ့ အခွင့်အရေး စတာတွေကို ရရှိသင့်သလောက်မရပဲ ချို့ တဲ့စွာနဲ့ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ကြသူတွေပါ ကြပ်တည်းကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အိမ်မှာနေရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ကြားမှာ ပဋိပက္ခတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်မငြင်းပါဘူး ကျွန်တော်တို့ ဌာနေတိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းတောင်မှ ခုချိန်ထိ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေနဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းစစ်မီး မငြိမ်းနိုင်သေးတာလူတိုင်းအသိပါ မတူညီတဲ့ဘာသာ မတူညီတဲ့လူမျိုးစုတွေကြားမှာ တစ်စုံတစ်ခုသော ပြသနာဟာ တခါတလေမှာ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ကြီးကျယ်သွားတတ်ပြီး စတင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ကြောင့် မျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံး အရိပ်ထိုးနာမည်ပျက်ခံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေလည်း ကျွန်တော်တို့ သမိုင်းမှာရှိခဲ့ပါတယ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ သမိုင်းရဲ့ စိမ်ခေါ်မှုတွေကို ပန်းရောင်မှတ်ပုံတင်အစစ်အမှန်ကိုယ်စီကိုင်ဆောင်ထားကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ခုချိန်မှာ အချင်းချင်းလေးစားခင်မင်မှုတွေနဲ့ အတူလက်တွဲဖြတ်သန်းစေချင်ပါတယ် အဲဒီအတွက် ကျွန်တော့်ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုတွေထဲက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်၊ဟိန္ဒူဘာသာဝင် အိန္ဒိယနွယ်ဖွားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ် ကျွန်တော့်ဇာတိက ရခိုင်ပြည်နယ် မာန်အောင်ကျွန်းကပါ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပါတယ် တကျွန်းလုံး ဗုဒ္ဒဘာသာ ရခိုင်များသာနေထိုင်ကြပါတယ် တချိန်က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အိန္ဒိယနွယ်ဖွားအနည်းငယ်ရှိခဲ့ပြီး ခုချိန်မှာတော့ တစ်ယောက်မှ မရှိကြတော့ပါဘူး။ မရှိတော့တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ နယ်မြေခံလူထုအနေနဲ့အိန္ဒိယနွယ်ဖွားများ(ဘင်္ဂလား၊ပါကစ္စတန်၊အိန္ဒိယ၊နီပေါ)များကို ကျွန်းပေါ်မှာ အခြေချနေထိုင်ခြင်းကို လက်ခံခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ကနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ နယ်မြေခံရခိုင်တွေကြားမှာ ၁၉၈၈အရေးအခင်းမတိုင်ခင်ထိ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်တော့်မိဘအိမ်ရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်ဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များရဲ့ နေအိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘိုးဘွားတွေနဲ့ သက်တူရွယ်တူဖြစ်တဲ့ အဲဒီအိမ်ကအဘိုးအဘွားတွေဟာ ကျောက်ဖြူဇာတိဖြစ်ပြီး သားသမီးတွေအကုန်လုံး မာန်အောင်မှာပဲ မွေးဖွားခဲ့ကြတာပါ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က ကျွန်တော့်အဖေရဲ့ ကျောင်းနေဘက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ အဲဒီအိမ်က အပျိုကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့ လက်ပေါ်မှာ ချီပွေ့ ထိန်းကျောင်းခံခဲ့ရပါတယ် ခုချိန်ထိ ကျွန်တော် လက်အုပ်ချီ ကန်တော့ဖူးတဲ့ မိဘသဖွယ်ကျေးဇူးရှင်တွေထဲမှာ အဲဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ညီအစ်မနှစ်ယောက်လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် သူတို့ မိသားစုဟာ ဘာသာခြားဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြို့ ရဲ့ သာရေးနာရေး ကိစ္စရပ်တွေထဲမှာ အမြဲလိုလို တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် အစ်ကို အကြီးဆုံးတစ်ယောက်က ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး သားသမီးတွေကို မာန်အောင်မှာပဲမွေးဖွားခဲ့ပါတယ် သူ့ မိန်းမရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကို လုံးမစွက်ဖက်တဲ့အပြင် ယနေ့ ချိန်ထိ မကြည်ဖြူတဲ့ အရိပ်အယောင်တောင် မပြခဲ့ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆီကို ရောက်လာခဲ့တဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်း၊နောက်ပြီး စီးပွားရေးသမား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တချို့ ရဲ့လွဲမှားတဲ့အပြုအမူတချို့ ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒေသဟာ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှု ယနေ့ ချိန်ထိ အမြစ်တွယ်သွားခဲ့ပါတယ် ရောက်လာကြတဲ့ လူတွေထဲက တချို့ ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဒေသခံအမျိုးသမီးအချို့ နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပြီး သူတို့ ရဲ့ မိန်းမတွေကို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အဖြစ်အတင်းအဓမ္မသွပ်သွင်းခြင်း၊ မိန်းမအမြောက်အမြားယူခြင်း၊နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းစတာမျိုးတွေ လုပ်လာတာတွေ့ လာရတဲ့အခါ မြို့ ခံလူထုဟာ သည်းမခံကြတော့ပါဘူး။ ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီး လူမှုရေးဖောက်ပြန်တဲ့ လူအချို့ ကြောင့် တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကို မြတ်နိုးစွာ ရာသက်ပန်စွဲကိုင်ကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့၊ ဘာသာရေးလူမျိုးရေး မျှတတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ဒေသဟာ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှု အပြင်းထန်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဂယက်ဟာ အေးချမ်းစွာနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ ဘာသာခြားအိမ်ထောင်တွေကို ရိုက်ခတ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၈ အရေးအခင်းကာလအပြီး လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ပူပန်လာရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ အစ္စလာမ်မိသားစုဟာ ကျွန်တော်တို့ ဇာတိမြေကနေ ရန်ကုန်ကို အပြီးတိုင် ပြောင်းရွေ့ သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒိနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ဒေသဟာခုချိန်ထိ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားတွေကို ကျွန်းပေါ်ကိုပေးမတက်တော့တဲ့အထိ လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှု ပြင်းထန်နေခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ဒေသအကြောင်းကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ကောင်းကောင်းသိကြမှာပါ။
ကုလားဆိုရင် မ၀တဥက္ကဌတောင်မှ သဘောင်္ဆိပ်မှာ ရောက်ရောက်ချင်း အရိုက်ခံရပါတယ်။အဲဒီလို အချင်းချင်း မုန်းတီးမှုတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ နဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကြားမှာ ယနေ့ ထိရှိနေတုန်းပါပဲ...ဒါပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်လောက်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကနေ မုန်တိုင်းမိပြီး စက်လှေပျက်လို့ပင်လယ်ထဲမျှောပါလာကြတဲ့ ဘင်္ဂလီရေလုပ်သားအယောက် နှစ်ဆယ်သုံးဆယ်လောက်ဟာ ကျွန်တော်တို့ ကျွန်းပေါ်ကို ရောက်လာကြပါတယ်။အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိ ကုလားမုန်းတီးရေး ဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ ဒေသခံတွေဟာ ဒီလူတွေကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဆက်ဆံကြလိမ့်လို့ ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ထင်တာ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားခဲ့ပါတယ်။ နယ်ခံလူတွေဟာ အဲဒီ ဘင်္ဂလားတွေကို အစားအစာ ၀လင်အောင် ကျွေးမွေး၊ အ၀တ်အစား အသုံးအဆောင်တွေ ၀ိုင်းဝန်းလှူဒါန်းကြတဲ့အပြင် သူတို့ ရဲ့ နေရပ်ကို ပြန်နိုင်အောင်အထိ ကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်ပြီး မာန်အောင်သားတွေရဲ့ စိတ်ထဲက ကုလားဆန့် ကျင်ရေးဆိုတာ လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှုလား၊ အမျိုးသားရေးလားဆိုတာ ကျွန်တော် ပထမဆုံးအကြိမ် ဒွိဟဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်ဒေသမှာရှိနေကြတဲ့ မူဆလင်တွေအများစုဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကနေ ခိုးဝင်လာကြတဲ့ သူတွေဖြစ်လို့ ဗမာပြည်မမှာရှိနေကြတဲ့ မူဆလင်တွေနဲ့ စရိုက်ချင်းတော်တော်ကွာခြားပါတယ်။ ဘာသာရေးအယူသီးမှု ပိုကြီးပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်း၊အတွေးအခေါ်လည်း နိမ့်ကျကြပါတယ်။ အဲဒီစရိုက်တွေကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ လူနေမှုဘ၀၊ယဉ်ကျေးမှုတွေထဲမှာ သူတို့ တွေဟာ အလွယ်တကူ စိမ့်ဝင်ရောနှော နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲဒီအခြေအနေဟာ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဒဘာသာဝင် ရခိုင်နယ်ခံတွေနဲ့သူတို့ ကြားမှာ ပဋိပက္ခတွေကို အလွယ်တကူဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်လာတဲ့အပြင် ပဋိပက္ခတွေနောက်ပိုင်း အချင်းချင်း ရန်ငြိုးတွေအပြန်အလှန်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။မျက်မှောက်ခေတ်အခြေအနေမှာ သူတို့ တွေနဲ့ ရခိုင်တွေကို ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ ဆိုတာ သိကြားမင်းလာဖန်ဆင်းတောင် ဖြစ်နိုင်ဖို့ မလွယ်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပါပြီ။အဲဒီလိုအတွေးအခေါ်နိမ့်ကျမှုကလည်း ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ မူဆလင်တွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက အစ္စလာမ်မစ် စစ်သွေးကြွတွေနဲ့သူတို့ ထဲက ပညာတတ်ခွဲထွက်ရေးသမားတွေရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို လိုလိုလားလား လိုက်နာဖို့ အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးပေးနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ပါလီမန်ခေတ်ကနေ စလို့စစ်အစိုးရလက်ထက်ထိ မခိုင်မာတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကြောင့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းက လူအချို့ ရဲ့လိုတစ်မျိုး မလိုတစ်မျိုး အဲဒီ ဘင်္ဂလီကုလားများကို အသုံးချခဲ့မှုတွေဟာလည်း ရခိုင်ဒေသရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားရေးကို အင်မတန်ထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရ၀န်ထမ်းအများစုရဲ့ လာဒ်ပေးလာဒ်ယူမှုကြောင့် ဘင်္ဂလီအချို့ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်လာကြပြီး ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ အခွင့်အရေးပေါင်းစုံတောင်းဆိုလာတဲ့အချက်ဟာလည်း ဒေသတွင်းမှာ လူမျိုးရေး အဓိကရုန်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ရွာမှာ ကုလားအနည်းစုနေထိုင်တာဟာ သိပ်ပြသနာမရှိပေမဲ့ ကုလားဦးရေ ရခိုင်နဲ့ ဆတူဖြစ်လာတဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ ရခိုင်တွေ တာရှည်နေဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တဘက်နိုင်ငံကခိုးဝင်လာပြီး အိမ်ထောင်ဘက်မြောက်မြားစွာနဲ့ သားဆက်ခြားမှုကို ဘာသာရေးအရလက်မခံတဲ့ ဒီလူမျိုးတွေရဲ့ မျိုးပွားမှုကလည်း ကြောက်ခမန်းလိလိတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါက ရခိုင်ဒေသမှာ ကျွန်တော်တို့ ကြုံနေရတဲ့ အကျပ်အတည်းတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် ရန်ကုန်ရောက်တော့ ကျောက်မြောင်းမှာနေပါတယ်။ အဲဒီမှာ အောင်မင်္ဂလာနဲ့ မင်္ဂလသုခ စာသင်တိုက်ဆိုပြီး ရခိုင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှစ်ကျောင်းရှိပါတယ်။အဲဒီဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရဲ့ ပတ်ပတ်လည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေက မူဆလင်နဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်ပြီး အနားမှာ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရဲ့ဘုံကထိန်ပွဲမှာ အနားမှာ နီးစပ်သမျှ မူဆလင်တွေ ဟိန္ဒူတွေ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ၀င်ရောက်ဆင်နွှဲကြတာ မြင်ရတော့ ကျွန်တော်တော်တော် အံ့သြမိပါတယ်။နောက်ပြီး ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း မီးနင်းပွဲနဲ့ ဒီ့ပြင်ဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေမှာလည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းက လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေ ငှားယမ်းပေးပြီး ပွဲလုံခြုံရေးကို သံဃာတော်တွေကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကူညီပေးတာတွေ့ ရတော့ တော်တော် ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။နောက်မူဆလင်တွေကလည်း သူတို့အစ်နေ့ မှာ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ချက်ပြုတ်ပြီး အနီးအနားက ရှိသမျှလူတွေကို မျှဝေလှူဒါန်းတာမျိုးကိုလည်း ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့ မှာနေထိုင်တဲ့ ဦးမောင်လှဆိုတဲ့ မူဆလင်တစ်ယောက်ဆိုရင် အောင်မင်္ဂလာကျောင်းက သက်တော် ရှစ်ဆယ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီးကို မနက်တိုင်းဆိတ်နို့ တစ်ပုလင်းလာရောက်လှူဒါန်းတာတွေ့ ရတော့ သူ့ ရဲ့ စိတ်ထားကို မချီးကျူးပဲမနေနိုင်ပါဘူး။နောက်ပြီး ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်းကာလအတွင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ၀င်စီးခံနေရတဲ့အချိန်မှာ ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရဲ့ ညဘက်လုံခြုံရေးကို ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေနဲ့ အတူ ၀ိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ကြတာ အနားက မူဆလင်တွေနဲ့ ဟိန္ဒူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘာသာခြားတွေဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းစဉ်လာကို လေးစားလိုက်နာပြီး မြန်မာတွေရဲ့ လူနေမှုဘ၀တွေမှာ ရောနှောစိမ့်ဝင် အလိုက်သင့်နေနိုင်ကြတဲ့လူတွေဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။နာဂစ်မုန်တိုင်းတုန်းကဆို ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲ လဲသမျှအပင်တွေကို အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းရှင်းလင်းကြပြီး သူတို့ ရဲ့ အိမ်တွေကိုလည်း သံဃာတော်တွေပါ ကူညီပြင်ဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အထိ အပြန်အလှန် ချစ်ခင်လေးစားမှု ရှိကြပါတယ်။တဘက်က စဉ်းစားကြည့်ရင် လူများစုဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေကို လူနည်းစုဖြစ်တဲ့သူတို့ တွေက အလိုက်အထိုက်ကြည့်နေပေးတာလို့သံသယဖြစ်ချင်ဖြစ်လို့ ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲဒီကာလတွေမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့ သူတို့ ရဲ့ မျက်နှာမှာ အလိုက်အထိုက် ၀တ်ကျေတန်းကျေဆိုတဲ့ သဘောမျိုး လုံးဝမတွေ့ ခဲ့ရပါဘူး။သူတို့ တွေရဲ့စိတ်ဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ဖြစ်နေပါပြီ။အဲဒီစိတ်ဓာတ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့သူတို့ ရဲ့ ရှေ့ က မျိုးဆက်တွေ ဘယ်လောက်တောင် မြန်မာပြည်မှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရမလဲ။တကယ်လို့ မြန်မာပြည်သားတိုင်းဟာ အခု လူ့ အခွင့်အရေးသမားတွေ စွပ်စွဲသလို လူမျိုးရေးမုန်းတီးသူတွေသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးတွေ မြင်ခွင့်ရပါ့မလား။ဒါပေမဲ့ အခု ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဟာမိုနီဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွင်းကို လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တဲ့ ဘင်္ဂလီတွေသာ ၀င်လာမယ်ဆိုရင် အခုဘာသာခြားတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကြားထဲမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ဒီအနေအထားအတိုင်းရှိနေပါ့မလား။ဒီခေါ်တောတွေရဲ့ လက်သင့်မခံနိုင်တဲ့ အကျင့်စရိုက် စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဒဘာသာတွေအားလုံး ကုလားမြင်ရင် ရိုက်သတ်ချင်တဲ့ မာန်အောင်သားတွေလိုဖြစ်မသွားဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မှာလဲ။အရင်ရှိနေတဲ့လူတွေကလည်း ရှိရှိသမျှ မြန်မာတွေကို အမုန်းကြီးမုန်းမသွားဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူး။နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းက မူဆလင်၊ဟိန္ဒူတွေနဲ့ အတူနေခဲ့ဖူးပါတယ်။သူတို့ အမဲသား၊၀က်သားမစားတဲ့အတွက် ကျွန်တော်လည်း ချက်မစားဖြစ်ပါဘူး။ဘ၀တူ အလုပ်သမားလူတန်းစား တစ်နိုင်ငံတည်းသားတွေဖြစ်လို့သူကကုလား၊ငါကရခိုင်ဆိုတဲ့ ခွဲခြားမှု မျိုးလဲ စိတ်ထဲမှာမရှိခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ လည်း ကိုယ့်လိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်ကျတော့ အလုပ်ထဲမှာ ဘင်္ဂလားတွေ ပါကစ္စတန်တွေနဲ့ ကျွန်တော်ပြသနာတက်ပါတယ်။တက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက သူတို့ ရေသောက်တဲ့ခွက်နဲ့ကျွန်တော် ရေခပ်သောက်မိတဲ့အတွက် ဘင်္ဂလားတစ်ယောက်က ခွက်ကို ရိုက်ခွဲပြီး ကျွန်တော်ကို ပြသနာရှာရာကနေစတာပါ။အဲဒီလိုဖြစ်တော့ ကျွန်တော့်နောက်မှာ အတူနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား မူဆလင် ဟိန္ဒူအကုန်ပါလာကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ ဘင်္ဂလားတွေ ပါကစ္စတန်တွေနဲ့ အတူ ကျွန်တော့်ကို တုတ်ဆွဲရိုက်ဖို့ ထွက်လာတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ချစ်လှစွာသော ရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်ကြပါတယ် ခင်ဗျား။
ကျွန်တော်တို့ ရိုဟင်ဂျာဆန့် ကျင်တဲ့လူတွေထဲက တချို့ ဟာ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုနဲ့အမျိုးသားရေးကို ကွဲကွဲပြားပြား နားလည်သဘောမပေါက်ကြသလို Pro-Rohingha Activist တွေဟာလည်း ဒီနှစ်ခုကို နားမလည်လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် သိသိကြီးနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ရောထွေးပြီး အသုံးချနေတာတွေ့ နေရပါတယ်။အားလုံးကို ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတာ အမျိုးသားရေးပါ၊ လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှုမဟုတ်ပါဘူ။လူ့ အခွင့်အရေးခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး အမျိုးသားရေးဆိုတဲ့နေရာမှာ လူမျိုးရေး ဘာသာရေးခွဲခြားမှုဆိုပြီး လိုချင်သလို ကောက်ချက်ဆွဲပြောဆိုမှုတွေကို ရပ်တန်းက ရပ်ပေးပါ။လူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူ့ အခွင့်အရေးဆိုတာကို သွန်သင်ဆုံးမချင်ရင် ဘာသာခြားဆိုရင် သတ်ပစ်ချင်လောက်အောင်မုန်းတီးတဲ့၊အိမ်ထောင်တွင်းမှာ ခေါင်းမြီးခြုံ ခလေးတွေ တစွတ်စွတ်မွေး မယားကြီး မယားငယ်တန်းစီ အိပ်နေရတဲ့ တခါတလေ တိရိ စ္ဆာန်လို နှိတ်စက်ညှင်းပမ်းခံနေရတဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ လင်တော်မောင်တွေဖြစ်တဲ့ ခင်ဗျားတို့ အချစ်တော် ရိုဟင်ဂျာတွေကို အရင် တရားသွားပြပါ။ဒီ Pro-Rohingha Activist တွေဟာ ကျွန်တော်တို့Anti-Rohingha အုပ်စုထဲက တချို့ ရဲ့Commentတွေကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ ကို ဟစ်တလာလို လူမျိုးရေးဝါဒီ၊ ဖက်ဆစ်လက်သစ်တွေ၊လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကြိုးပမ်းနေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ လက်ကိုင်တုတ်တွေအဖြစ် နိုင်ငံတကာသတင်းကွန်ယက်တွေမှာ ပုံဖော်နေတာကို စိတ်ပျက်စွာ တွေ့ မြင်နေရပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ သာ ဟစ်တလာလို ခေတ်ဟောင်းဂျာမန်စရိုက်မျိုးရှိခဲ့ရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဆိုးဝါးဆုံး စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ သူတို့မျိုးတုန်းပြီးဖြစ်နေလောက်ပါပြီ။နောက်တစ်ချက်က ကမ္ဘာ့အနှံ့ လှေစီးသွားနေတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ထက် ချမ်းသာတဲ့လူတွေပါနေတယ်ဆိုတာကို Pro-Rohingha သမားတွေ သိကြပါရဲ့ လား။မြန်မာပြည်မထဲကို ၀င်ဖို့သူတို့ ပေးရတဲ့လာဒ်ငွေပမာဏကိုပဲ အရင်စုံစမ်းကြည့်ပါ ပြီးမှ သြစတြေးလျနဲ့ နယူးဇီလန် သွားရင် ပွဲစားခ လှေစီးခဘယ်ဈေးပေါက်လဲ မေးကြည့်လိုက်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ ငတ်လို့လုပ်စားစရာမရှိလို့ ထွက်ပြေးရတဲ့လူတွေ ဒီလောက်ပိုက်ဆံကို ဘယ်ကရသလဲဆိုတာ။ပြီးတော့ ရိုဟင်ဂျာနာမည်ခံပြီး အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်ရောက်နေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား လူလတ်တန်းစားဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုပါ စုံစမ်းကြည့်ကြပါအုန်း။နိုင်ငံကို တကယ်မချစ်ပဲ၊ နိုင်ငံ့အကျိုးကို ဘာတစ်ခု ထမ်းရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့၊ဒေသခံတွေနဲ့အကြီးအကျယ် ရန်ငြိုးရန်စရှိနေတဲ့၊နိုင်ငံတကာမှာ လှည့်လှည်တောင်းစားဖို့ ဒီနိုင်ငံ ဒီလူမျိုးတွေအကြောင်းကို ရစရာမရှိအောင်အပုပ်ချနေတဲ့၊ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ သမိုင်းကို မမှန်မကန်ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲစွာ အတုဖန်တီးပြီး ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဘိုးဘွားပိုင်မြေကို ဖဲ့ထုတ်ဖို့ ကြံရွယ်နေတဲ့ ဒီလူမျိုးတွေကို ကျွန်တော်တို့ လက်ခံသင့်သလားဗျာ။တကယ်လို့သူတို့ ဟာ ကျွန်တော်တို့ နဲ့သမိုင်းတလျှောက် ဘာရန်ငြိုးရန်စမှမရှိဘဲ ပြေပြေလည်လည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအနေအထားအရ လက်ခံဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တချိန်လုံး ကြပ်တည်းစွာနေခဲ့ရပေမဲ့ တနေ့ မှာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ချောင်ချောင်လည်လည်နေကြရတော့မှာပါ။အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဒီလူမျိုးတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အရင်ရှိနေတဲ့လူတွေ ပိုပြီး ကြပ်တည်းကျဉ်းမြောင်းတဲ့ဘ၀ကို အရောက်ခံကြမလား။မြန်မာပြည်သား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ညီနောင်များအနေနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ချင်း စာနာသနားစိတ်ရှိသင့်တာ လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ လဲ သူတို့ ကို ခင်ဗျားတို့ အိမ်ပေါ် တက်နေရဲတဲ့အထိတော့ စာနာစိတ်မထားနိုင်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ယုံတယ်။အမျိုးသားရေးဆိုတာ ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေး၊နိုင်ငံရေး၊လူမှုရေး၊လူ့ အခွင့်အရေး အားလုံးရဲ့ အပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော် စွဲစွဲမြဲမြဲ ယုံကြည်ထားပါတယ်။အခု ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ ကို ခင်မင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ ကလည်း ခင်ဗျားတို့ ကို ခင်မင်လေးစားတယ်။လမ်းမှာတွေ့ ရင် အချင်းချင်းနှုတ်ဆက် လိုအပ်တဲ့အကူအညီအပြန်အလှန်ပေးကြတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ခေါ်တောတွေသာရောက်လာရင် ကျွန်တော်တို့ အချင်းချင်း လမ်းမှာတွေ့ ရင် ဖော်ဖော်ရွေရွေ ပြုံးပြနိုင်ပါအုန်းမလား။တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သံသယစိတ်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတို့ကက်ရ်ှမီးယားတို့ မှာလို သူမသတ်ခင် ငါဦးအောင်သတ်မယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုး မရောက်ရအောင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း လက်တွဲကြစေချင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ Anti-Rohingha အဖွဲ့ သားတွေကလည်း ပြည်တွင်းက အိန္ဒိယနွယ်ဖွားညီနောင်များကို ထိခိုက်စေမဲ့ အပြောအဆို အရေးအသားမျိုးတွေ၊ ပြည်ပရောက် Pro-Rohingha သူတောင်းစားတွေ ပြန်အသုံးချလို့ ရမဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကြဉ်စေလိုပါတယ်။
လူသားအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်..ဒါပေမဲ့ Pro-Rohingha သူတောင်းစားတွေ နဲ့ Rohingha ခေါ်တောများမပါပါ။
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: အိန္ဒိယနွယ်ဖွားမြန်မာနိုင်ငံသားများသို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာ . All Rights Reserved